Phakathi imifino eziningi ezitolo ngokwethukela wathola isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi; kanjani ukupheka, kodwa bambalwa bayazi. Kodwa-ke iqukethe omningi izakhi ezidingwa umzimba. Isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi akugcini nje esesuthi ukushukuma, kodwa futhi unalo izakhiwo eziningi zokwelapha, isib, umthelela isinqandakuvunda, ngcono umzimba nabanye.
Kuyathakazelisa ukuthi kuyi-ukudla washisa cishe zonke izingxenye zalesi sihlahla, amaqabunga kanye imbewu yokuqedela. Ngaphezu kwalokho, abantu abakukhathalelayo sibalo zabo zingahluka imenyu lo mkhiqizo, akesabi ukuthi bayothola isisindo. Naphezu kweqiniso lokuthi kukhona izitsha eziningi kangaka lapho omunye izithako isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi izenzo njengoba umpheki, namanje siphakamisa imibuzo eminingana.
amahlamvu isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi, kanye impande, esetshenziswa njengoba condiment kuya izifundo main, imbewu yayo kunezelwa imifino ifakwa emathinini ukuze ukunambitheka kanye ukunambitheka okubabayo. Kodwa ngokuvamile ingatholakala kokudayiswa umoba isitshalo. Basuke kuhlanganiswe kahle ukunambitha ne cishe kunoma iyiphi yemifino, inyama, ukudla kwasolwandle, inhlanzi. Kodwa ngokuvamile njengoba impande isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi, futhi pedicellate, kungase kube isidlo ezimele agcwele.
Ngokwesibonelo, ungakwazi ukupheka isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi okuthosiwe. Leresiphi akudingi a lot of izithako kanye isikhathi esichithwa ukupheka. Tuber lokhu yemifino kuthiwa ehlutshiwe sibe yimichilo noma tincetu nomzimba omncane, eligoqiwe endishini, abafafazwe kalamula; engeza sauce soy kancane futhi kwesokunxele isikhashana. Ngemva kwalokho, ube esethatha ucezu ngalunye esithathwayo, ushayeke phansi e ufulawa ethosiwe endaweni ukuthosa emlilweni ophansi kuze brown yegolide. Lokhu dish kungaba yinto enhle kakhulu side dish ukuze inyama noma inhlanzi, futhi ingasetshenziswa ngokwehlukana.
Ubilise lokhu yemifino ulula. Ngaphambi ukupheka impande isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi izitshalo bahlanza, uthathe cubes ezincane futhi aphonse amanzi abilayo. Ukukhuluma ngokuthi kungakanani ukupheka isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi, kufanele kuphawulwe ukuthi isikhathi zingase zihluke, kuye ngokuthi indlela oqoshiwe imifino, noma ezinye izimfanelo zayo. Kodwa ngokuvamile akuthathi imizuzu engaphezu kwengu-20, futhi kanjani amazambane ukupheka. By the way, lezi ezimbili impande kungenziwa abilisiwe ndawonye bese ziphenduka zibe puree. Ukunambitheka lokhu sauce kuyoba ophithizelayo kunalaba amazambane ezivamile, kanye amavithamini namaminerali esitsheni kuyoba okuningi. Ungase futhi kubangele imifino kuhhavini, sibe yimichilo, inkathi nabo nge garlic othulini uhlanganise anyanisi, wawukhona izindandatho.
Naphezu kweqiniso lokuthi kukhona inqwaba zokupheka lapho isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi iqeda, abilisiwe noma okuthosiwe, kuyoba nenzuzo ukuyisebenzisa ukudla okuluhlaza, ibhekwa isaladi njengoba. Ngokwesibonelo, impande yemifino bazokwenza lokho nakuBafana, exutshwe apula ochotshoziwe, futhi imayonnaise. Isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi leaf kuzokuhambela kahle evamile yemifino isaladi ehlanganisa utamatisi kanye ukhukhamba.
Kumele kuqashelwe ukuthi le yemifino liyasetshenziswa ukulungiswa izitsha yokuqala. Kungaba ukungezwa isobho kanye amazambane (noma esikhundleni), futhi kungenzeka ukupheka isobho, ogxile isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi. Indlela ukupheka kufanele zichazwe ngokuningiliziwe. Isobho ezinhlanu enosayizi omaphakathi umoba Diced futhi iyisitshulu isikhashana e-bhotela. Lokhu kuphinda kungeze amazambane amabili abilisiwe izaqathi. Imifino kugaywa in a blender, batheleka 200 ml ukhilimu ekubhaxabulweni, isobho usawoti, pepper kanye ukubeka ukufudumeza ukuze abilayo. isidlo Tholakele sakhonza kahle croutons, okuthosiwe in egg.
Ukwazi indlela ewusizo isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi yemifino, indlela ukupheka - ngeke okungadala ubunzima, ngoba ukunambitheka omuhle cishe noma yimuphi dish.
Bangaki okuphekiwe yemvu ngoba umhluzi, pilaf e multivarka. Izici iwundlu